အိမ်သစ်ခွေးကလေးကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ Dogs World
ခွေးပေါက်စတွေကငါတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပျော့ပြောင်းစေတဲ့အကြည့်တစ်ခုရှိတယ်။ ထို့အပြင်သူတို့၏လုပ်ရပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရယ်မောစေပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အချိန်များများရနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကသေချာသည် furry နှင့်အတူစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောခင်မင်ရင်းနှီးဖြစ်လတံ့သောအရာကိုတည်ဆောက်နေကြသည်.
ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ ကောင်းသောဆက်ဆံရေးဟာညာဘက်ခြေထောက်ပေါ်ကနေစရပါမယ်။ ဒါဆိုငါပြောမယ် ခလေးကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ.
ခွေးကလေးသည်ဥယျာဉ်၌ကစားလို။ ကစားလိုပေမည်၊ သို့သော်သူ၌ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသဖြင့်၎င်းအားသုံးလအရွယ်အထိအိမ်တွင်း၌ထားရန်အထူးအကြံပြုလိုသည်၊ သူသည်သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်အား (parvovirus, distemper, hepatitis and adenovirus) တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ မေးခွန်းမှာ - အရာရာတိုင်းနှင့်အတူကစားရန်နှင့်သူအိပ်ရာမပျော်မချင်းသူ့အိမ်အသစ်ကိုနာရီပေါင်းများစွာစူးစမ်းလိုစိတ်ရှိသည့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုမည်သို့အေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရမည်နည်း။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာလုံးဝမလွယ်ကူပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ထင်ထားသည်ထက်ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသည်ဟုဆိုရမည်။ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ တကယ်တော့သူ့ကိုသင်အရမ်းပျော်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်၊ နောက်ဆုံးတော့သူငြီးငွေ့လာတယ်။ ထိုအဘို့, သင်တန်း, ကျနော်တို့အချိန်ဖြုန်းနှင့်သူနှင့်အတူကစားရန်ရှိသည်.
ခွေးများသည်ကစားရန်လိုအပ်သော်လည်းခွေးပေါက်စများတွင်ကစားနိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးကွက်တွင်ကစားစရာအမျိုးအစားများ၊ ဘောလုံးများ၊ ကြိုးများနှင့်သင့် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမည့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကစားစရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ထောက်လှမ်းရေးဂိမ်းတွေအကြောင်းပြောရင်မင်းကအားသာချက်ယူနိုင်တယ် အခြေခံပညတ်ချက်များကိုသင်ပေးပါထိုကဲ့သို့သော "ထိုင်", "ဆဲ", "လဲလျောင်း" သို့မဟုတ် "ရေလွှမ်းမိုးသော" (ခြေထောက်ပေး) အဖြစ် leash အပေါ်လမ်းလျှောက်အဖြစ်။
ဤနည်းအားဖြင့်သင်နောက်ဆုံးတွင်ခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်ပြသနိုင်သည့်အခါ ya သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ရေးမှာအများကြီးတိုးတက်ပါပြီလိမ့်မယ်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ သင်၏ခွေးသည်မည်သို့ပြုမူရမည်၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခွေးကလေးကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ
Siberian Husky ၏ထူးခြားချက်များ